Ataovy mora foana ny lohatenin'ny WordPress | Martech Zone
Ataovy mora foana ny mitondra ny lohateny WordPress anao
Alakamisy 21, 2013 Douglas Karr
Izaho dia nitady plugin na kaody vitsivitsy hanovana lohateny lehibe ao amin'ny pejin-tranonay DK New Media mba miala voly kely ary mitafy kely ny pejy fandraisana. Ny olana dia manana lohahevitra napetraka aho izay misy saha manokana momba ny tsipika tag sy ny famaritana ilay tranokala, ary tsy nahatsapa ny hanala azy io tamin'ity fanovana ity aho.
Mba hanaovana izany amin'ny plugins sy fanovana lohahevitra dia mitaky fampiasana ny mahafinaritra Plugin Advanced Custom Fields miaraka amin'ny Adde on Field Repeater - izao no hataonay ho an'ny mpanjifa. Ho an'ny tranonkalantsika anefa, matetika izahay dia mandray hitsin-dalana ary ity sombin-kaody kely ity dia mandeha tsara ihany koa!
Amin'ny ankapobeny, mampiditra lohateny marobe amin'ny sehatra iray ianao ary manasaraka azy ireo amina toetra vitsivitsy (Mampiasako ilay marika "|"). Avy eo ianao dia afaka mampiasa ny asan'ny fipoahan'ny PHP izay mametraka ny lohateny rehetra ao anaty laharana iray ary avy eo mampiasa ny fiasan'ny volan'ny PHP hanovana ny filaharan'ny laharana, ary avy eo dia asehoy ny valiny voalohany. Ny valiny voalohany ihany no asehonao… amin'ity fomba ity raha tsy manana vokatra tokana ianao dia mbola haseho tsara ihany!
Ao amin'ny lohahevitray aseho ny lohateny, dia soloinay izao kaody manaraka izao fotsiny ny lohateny:
Raha te halaza ianao dia azonao atao ny mandefa izany a fiovana manokana ao amin'ny Google Analytics ary andramo izay lohateny manao ny tsara indrindra!
Tags: nipoakaFimitsimbadikarotate lohatenyshufflefehezan-tenyWordpress theme
Ny fiakaran'ny varotra finday sy ny tombony ho an'ny mpivarotra
Litmus: Afaka mamaky ny mailakao ve ny olona?